Shirkada DP World oo ka hadashay heshiiska Carabta Iyo Israa'iil - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Shirkada DP World oo ka hadashay heshiiska Carabta Iyo Israa’iil
Shirkada DP World oo ka hadashay heshiiska Carabta Iyo Israa’iil
” Israel waan u baahanahay, iyagana way noo baahan yihiin.”
“Heshiisyada nabadeed ee ay Israa’iill la gashay Imaaraadka iyo Baxreyn ayaa, ” wax weyn u noqon doona” ganacsiga gobolka,” mid ka mid ah ganacsatada ugu saameynta badan Bariga Dhexe ayaa sidaasi u sheegay BBC-da.
Sultan Ahmed bin Sulayem, oo ah gudoomiyaha iyo agaasimaha guud ee shirkada DP World ee fadhigeedu yahay Dubai, ayaa sheegay inay meesha ka saarayaan caqabadaha hortaagan isku xirka ganacsiga ee markii horaba “aan la ogoleyn”, iyagoo soo gaabin doona waddooyinka ganacsiga isla markaana fududeyn doona la macaamilka Yurub.
Israa’iill ayaa sheegtay in qiyaas ahaan ganacsiga Imaaraadku uu sannadkiiba gaari doono afar bilyan oo doolar, uuna abuuri karo ilaa 15 kun oo shaqo.
Mr bin Sulayem wuxuu qirsan yahay inay faa’iido u leedahay labada dhinacba: ” Israel waan u baahanahay, iyagana way noo baahan yihiin.”
Waxay u badan tahay in ganacsiga Carabta iyo Israa’iil uu koro haddii lagu daro badeecado badan oo haatan ay dalalka bariga dhexe u soo dhoofiyaan Dubai.
Toddobaadkan, Markabka MSC Paris waxuu noqotay mid ka mid ah maraakiibtii ugu horreysay ee xamuul ah oo sameeya safarka labada dal, waxaana baarlamaanka Israa’iil uu si rasmi ah u ansixiyay heshiiska ay la galeen Imaaraadka Carabta.
Raysal wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay agabkaasi ka kooban qalabka elektarooniga, nadaafadda, birta iyo qalabka dab-demiska waxa uuna ku tilmaamay “bilow aad u weyn”.
DP World waa shirkadda maamusha dekadaha aduunka ugu waaweyn waxayna haatan lashaqeyneysaa shirka DoverTower ee ay Israa’iil leedahay si loo balaariyo dalalka ay shirkadda ka howlgasha. Israel waxay dooneysaa inay hagaajiso xarumaha dekedda ee Ashdod iyo Haifa oo muhiim u ah dhaqaalaheeda.
Previous articleDowlada Soomaaliya iyo Talyaaniga oo heshiis kala saxiixday
Next articleCiidamo gadood ah oo qabsaday xarun wasaaradeed